သင်နှင့်အတူ $ 1B အခွန်ငွေဝေမျှခြင်းအစီအစဉ်ကို Google ကြေငြာသည်။ | Martech Zone
ယင်း မဟုတ် ဟုတ်ကဲ့, မျှသာငါးစာချိတ်ဆက်။
Metacafeဗီဒီယိုများအတွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်တစ်ခုပဲရှိတယ် $ 1,000,000 သာလွန် ယင်း၏အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့်အတူမျှဝေဝင်ငွေ။ Mike သည် Revver သည်ယခုနှစ်တွင်ဝင်ငွေခွဲဝေမှုမှဒေါ်လာတစ်သိန်းအထိရရှိခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ငါဝေဖန်ခံရတယ် အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများအပေါ်ဂူးဂဲလ်၏တိုက်ခိုက်မှု အဘယ်သူသည် link ကိုနေရာချထားများအတွက်ငွေပေးချေမှုမြှူဆွယ်တောင်းခံ။ Michael Graywolf မှာလည်းသူရှိတယ် အဓိကဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုယူပြီး ဂူဂဲလ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများ - ကို - ဖြစ်ရန်သိမ်းဆည်းရန်တာဝန်။
Google က၎င်းသည်၎င်း၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုပြောကြားသည် အမှန်တကယ် အော်ဂဲနစ်။ Google Terms of Service ၏မီးခိုးရောင်areaရိယာသည် ဆက်လက်၍ မှုန်ဝါးနေဆဲဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက၊ Matt Cutts သည်လင့်ခ်များအားလုံးကိုအကြံပြုလိမ့်မည် ကမကထပြုသောပို့စ်တွင် nofollow tags များနှင့်စနစ်တကျတံဆိပ်တပ်ရမည်။
သူတို့အား 'အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူ' တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပေးဆောင်ထားသောလင့်ခ်ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစွာကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်။ Metacafe နှင့် Revver တို့သည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပံ့ပိုးသူများမပါဘဲအလားအလာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသကဲ့သို့ Google သည်လည်းထိုအရာကိုပိုင်ဆိုင်သင့်သည်။
အကယ်၍ ဂူဂဲလ်မှပေးသောလင့်ခ်များကိုဖျက်သိမ်းရန်အလေးအနက်ထားပါက၎င်းတို့သည်အမြတ်အစွန်းရရှိသောကျွန်ုပ်၏အော်ဂဲနစ်ပါဝင်သည့်အရာများ (၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ထောက်ပံ့ထားသောလင့်ခ်များဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြင့်) ကိုသူတို့ဝေမျှသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Google ကိုသုံးစွဲသူများကိုထောက်ပံ့ခွင့်ပေးသည့်အလွန်များပြားသောပမာဏအတွက်ငါ့ကိုဘာကြောင့်မပေးသနည်း။
ဂူးဂဲလ်ကအင်တာနက်ကိုမပိုင်ဘူး။ အဲဒါဟာဂူဂဲလ်မဟုတ်ဘဲမင်းရဲ့အကြောင်းအရာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာဂူးဂဲလ်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုအချိန်တစ်ဝက်လောက်ရဖို့အရမ်းအလုပ်များနေပြီးအဲဒါကိုမေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ဂူးဂဲလ်သည်ကွန်ရက်ပေါ်ရှိလူတိုင်းအပေါ်တွင် 'သူတို့' ကိုနေရာချထားခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သောအလုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Tags: Digg လူ ဦး ရေအချိုးအစားdmarc သတ်မှတ်ချက်မင်္ဂလာပါအီးမေးလ် phishingFacebook ကိုလူ ဦး ရေအချိုးအစားဂူဂဲလ်ပေါင်းလူ ဦး ရေစာရင်းlinkedin လူ ဦး ရေစာရင်းpinterest လူ ဦး ရေအချိုးအစားreddit လူ ဦး ရေrel = ငါ့ကိုslider ကိုလူမှုမီဒီယာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်လူမှုရေးမီဒီယာလူ ဦး ရေအချိုးအစားလူမှုမီဒီယာလူ ဦး ရေအချိုးအစား
30:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 18 တွင်
ငါဒီလငါဒေါ်လာ 40 နီးပါးလုပ် revver shared ဝင်ငွေအစီအစဉ်၏ကြား၏ Affiliate အစီအစဉ်ကိုမတိုင်မီ metacafe အကြောင်းကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးတယ်, ဒါကငါက Google adsense အတွက်လုပ်ထက်ပိုမိုသောအရာသွားပါ။ google သည်အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များအတွက်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေသင့်သည်၊ အချို့ရွေးချယ်ထားသောပါ ၀ င်သူများအစားအများပြည်သူအတွက် youtube ကိုသာရောင်းသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
30:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 06 တွင်
30:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 28 တွင်
ထိုကိစ္စအတွက်ဂူဂဲလ်နှင့် Yahoo နှစ်မျိုးလုံးသည်အသုံးပြုသူများကိုဂူးဂဲလ်နှင့် Yahoo ကိုသာအကျိုးရှိစေမည့်သုံးစွဲသူများအပေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်။ ရှင်းနေသည်မှာသင်မှန်ပါသည်။ အင်တာနက်နှင့်အသုံးပြုသူများမှတင်ထားသောအကြောင်းအရာများသည်လမ်းညွှန်များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်မဟုတ်ဘဲသုံးစွဲသူများပိုင်သည်။ စိန်ခေါ်မှုကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေစက္ကူသွင်ပြင်လက္ခဏာသည်စနစ်ကိုမောင်းနှင်စေသောအရာဖြစ်ပြီးအမြန်ရရန်အမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသူများမှာအစိုးရ၊ အစိုးရမှမှားယွင်းသောစကားလုံး၊ အဆင့်အတန်းမရှိလျှင်အထက်သို့လက်ဝယ်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ။
30:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 23 တွင်
ငါရောက်ပြီ ခဏ Google အတွက်သတိထား!
30:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 32 တွင်
ဒါ့အပြင်ဒီမှာအရမ်းသက်ဆိုင်: ငါ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ် (အစဉ်အဆက်?) "စီးပွားရေးအသစ်အတွက်စည်းမျဉ်းသစ်များKevin Kelley က“ superwinners” သည်သင်အွန်လိုင်းစာဖတ်နိုင်သည့်အခန်း ၂ ရှိကွန်ယက်စီးပွားရေး၏“ အနိုင်ယူသူအများဆုံး” ပတ် ၀ န်းကျင်မှမည်သို့မည်ပုံရရှိသည်ကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ဒါဟာ (နှင့်စာအုပ်တပြင်လုံးကို) ကျိန်းသေတစ် ဦး ဖတ်ရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ BTW ကို Google တည်ရှိခြင်းမတိုင်မီကရေးသားခဲ့သည် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလူသိများသည်။ )
Denise Baraka လောရင့်
ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 မှာ 2: 57 AM
စီးပွားရေးမော်ဒယ်အသစ်ဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသစ်တစ်ခုအတွက်အချိန်ရှိကောင်းရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်သည်မည်မျှအသစ်စက်စက်နှင့်စီးဆင်းနေသောအခြေအနေကိုမေ့လျော့လေ့ရှိသည်။ Northern Light ကအများပြည်သူရှာဖွေရေးကိုပိတ်လိုက်သည့်နေ့တွင်ငိုနေသည်ကိုမှတ်မိသည်။ ၎င်းသည်စားသုံးသူရှုထောင့်မှကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်မျှော်လင့်ချက်ရှိသော်လည်းဂူးဂဲလ်သည်“ ကျရှုံးရန်အလွန်ကြီးလွန်းသည်” အမျိုးအစားတွင်ရှိသည်။ သင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့…သူတို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သောကြောင့်စားသုံးသူကသူတို့ကို“ ဆက်ဆံ” သောကြောင့်ပျော်ရွှင်စွာတာဝန်ယူရသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအမြဲတမ်းထင်မြင်ယူဆသည့်နည်းတူ -“ အဟ်၊ ဒါကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ၊ ငါ့ကိုယူခွင့်ပြုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်ဘာမှမရှိဘူး။ ” အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 မှာ 2: 59 AM